कम्प्युटर मा प्ले स्टोर: कसरी एप स्टोर मा प्रवेश गर्न को लागी? | मोबाइल फोरम
तपाइँको कम्प्युटर मा प्ले स्टोर: कसरी एप स्टोर मा प्रवेश गर्न को लागी?
यदि तपाइँ कहिले सोच्नुभएको छ कि कसरी तपाइँको कम्प्युटर मा प्ले स्टोर छ, यहाँ तपाइँ जवाफ पाउनुहुनेछ। पक्कै, यदि तपाइँ पहिले नै एक एन्ड्रोइड उपकरण को एक उपयोगकर्ता हो, तपाइँ राम्रो संग मोबाइल उपकरणहरु र ट्याब्लेट को लागी यो अपरेटि system सिस्टम संग काम गर्ने प्रसिद्ध आधिकारिक अनुप्रयोग स्टोर संग परिचित हुनुहुन्छ। यो पक्का छ कि तपाइँ पहिले नै त्यहाँ उपलब्ध अनुप्रयोगहरु को धेरै डाउनलोड गरीरहनुभएको छ, दुबै नि: शुल्क र सशुल्क। ठिक छ, अब तपाइँ तपाइँको कम्प्युटर स्क्रिन बाट उही गर्न सक्नुहुन्छ।
गुगल प्ले स्टोर एक महान खजाना छाती को लागी केहि समान छ जहाँ हामी सबै कुरा पाउने छौं: अनुप्रयोगहरु, डिजिटल किताबहरु, संगीत, चलचित्र र खेल ..। उत्तरार्द्ध को बारे मा, यो ध्यान दिनुपर्छ कि त्यहाँ एक विशेष Google प्लेटफर्म छ जहाँ हामी हाम्रो आफ्नै प्रोफाइल बनाउन र बिभिन्न चुनौतिहरुमा भाग लिन सक्छौं। यो मात्र धेरै लाभहरु को एक हो कि गुगल को महान अनुप्रयोग स्टोर प्रदान गर्दछ।
आधिकारिक रूपमा, प्ले स्टोर मात्र एन्ड्रोइड फोन वा ट्याब्लेट को लागी उपलब्ध छ। यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। जे होस्, त्यहाँ अन्य तरिकाहरु यो अनलाइन स्टोर र हाम्रो कम्प्यूटर बाट यसको सबै सामग्री को उपयोग गर्न को लागी छन्। साथै नि: शुल्क। हामी यसको बारेमा तल मात्र धेरै विस्तार मा बताउन जाँदैछौं। यो अपरेसन कुनै पनी कम्प्यूटर मा प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, चाहे यसको अपरेटि system सिस्टम विन्डोज, म्याक ओएस (एप्पल) वा लिनक्स हो।
तर जारी राख्नु भन्दा पहिले, एउटा प्रश्न को जवाफ दिनुहोस् कि सायद धेरै प्रयोगकर्ताहरु आफैंलाई सोध्छन् जब यो मुद्दा उठाईन्छ: हामी किन कम्प्यूटर मा प्ले स्टोर को उपयोग गर्न चाहन्छौं? दुई मुख्य कारण यी हुन्:
किनभने हामी एक एन्ड्रोइड उपकरण छैन र हामी सबै फाइदाहरु को लागी गुगल प्ले स्टोर हामीलाई यसको अनुप्रयोगहरु, चलचित्रहरु र अन्य प्रणाली को लागी विशेष गरी यस प्रणाली को लागी डिजाइन गरीएको छ को लागी पहुँच गर्न चाहन्छौं।
किनकि हामी एक ठूलो पर्दा बाट प्ले स्टोर अनुप्रयोगहरु प्रयोग गर्न मनपर्छ, कीबोर्ड र माउस संग, सबैभन्दा सहज तरीका मा। विशेष गरी जब हामी खेल को बारे मा कुरा गर्छौं।
1 तपाइँको कम्प्युटर मा प्ले स्टोर भएको को लाभ
2 उत्तम एन्ड्रोइड एमुलेटरहरू
तपाइँको कम्प्युटर मा प्ले स्टोर भएको को लाभ
तपाइँको कम्प्युटर मा प्ले स्टोर भएको धेरै रोचक फाइदाहरु छन्
पहिले उजागर दुई बिन्दुहरु मा गहिरो जाँदै, हामी महान सूची गर्न सक्नुहुन्छ फ्यानहरू जसमध्ये हामी हाम्रो कम्प्युटर बाट गुगल प्ले स्टोर को उपयोग गर्न को लागी रमाईलो गर्न को लागी सक्षम हुनेछौं, उनीहरु निम्न छन्:
हामी हाम्रो मोबाइल ब्याट्री को उपयोगी जीवन विस्तार हुनेछ। यो सही छ: यदि हामी घर मा छौं हामी हाम्रो कम्प्यूटर को उपयोग गर्न को लागी कुनै पनि अनुप्रयोग को उपयोग गर्न को लागी सक्षम हुनेछौं। यस संग, हामी हाम्रो मोबाइल फोन को ब्याट्री को लागी एक ब्रेक दिनेछौं, जसलाई सबैलाई थाहा छ, अधिक खर्च गरीन्छ यो जति धेरै प्रयोग गरिन्छ।
हामी कम्प्यूटर किबोर्ड को उपयोग गरेर अधिक आराम संग लेख्न सक्छौं। यो धेरै महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्न सक्दैन, तर यो अनुप्रयोगहरु को लागी हो कि तपाइँ लेख्न को लागी हो (खेलहरु कि च्याट, तत्काल सन्देश अनुप्रयोगहरु, खोज बक्सहरु, आदि शामिल छन्)
हामी खेल मा एक अधिक पूर्ण अनुभव को आनन्द लिनेछौं। विशेष गरी ती धेरै उन्नत र जटिल मा, जो धेरै विकल्पहरु छन्। ती केसहरु को लागी, कीबोर्ड र माउस भन्दा राम्रो केहि पनी उनीहरु बाट उत्तम प्राप्त गर्न को लागी।
हामी मोबाइल मा "फिट" गर्दैनन् कि आवेदन डाउनलोड गर्ने सम्भावना हुनेछ। एप्स जुन हामी सामान्यतया मेमोरी वा शक्ति को कमी को कारण बाट स्थापित गर्न सक्दैनौं यो विशेष पहलू मा, कुनै मध्य दूरी को कम्प्यूटर असीम रूप मा मोबाइल फोन को सबै भन्दा राम्रो छ।
उत्तम एन्ड्रोइड एमुलेटरहरू
तपाइँको कम्प्युटर मा गुगल प्ले स्टोर डाउनलोड गर्न को लागी, सबैभन्दा सजिलो र सबैभन्दा सहज तरीका हो एक एन्ड्रोइड इमुलेटर स्थापना गर्नुहोस् सीधै हाम्रो पीसी मा। यसो गरेर, अनुप्रयोग स्टोर पूर्वनिर्धारित द्वारा स्थापित गरिनेछ र यसैले हामी हाम्रो पीसी मा वस्तुतः एन्ड्रोइड चलाउन सक्छौं।
अन्य शब्दहरुमा, विचार अर्को भित्र एक अपरेटि system सिस्टम छ। स्थापना पछि हामी हाम्रो आफ्नै कम्प्यूटर बाट एन्ड्रोइड चलाउन सक्षम हुनेछौं, बिल्कुल उस्तै तरीकाले हामी कुनै अन्य कार्यक्रम संग हुनेछ। ठूलो फरक यो हो कि यो "कार्यक्रम" हामीलाई गूगल प्ले स्टोर सहित अनुप्रयोगहरु को एक धेरै को लागी पहुँच दिनेछ।
यस प्रकार, पहिलो पटक हामी कम्प्यूटर मा एन्ड्रोइड खोल्छौं, हामी प्रदर्शन गर्न को लागी अगाडि बढ्नु पर्छ प्रारम्भिक सेटअप सामान्य प्रक्रियाहरु को माध्यम बाट (हामी हाम्रो ईमेल प्रविष्ट गर्न को लागी हुनेछ जीमेल र अन्य डाटा), तर एक पटक यो गरिन्छ प्रणाली स्वचालित रूप मा इन्टरनेट मा जडान हुनेछ।
हामी बताउँछौं कि कसरी यो अपरेशन पूरा गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो एन्ड्रोइड एमुलेटरहरु छन् कि आज अवस्थित छन्: BlueStacks y एन्ड्रोइड। त्यहाँ धेरै अन्य, जस्तै रीमिक्स ओएस वा Leapdrop छन्। जे होस्, पहिलो दुई सबैभन्दा धेरै दुनिया भर मा प्रयोग गरीन्छ र ती सबै भन्दा राम्रो हाम्रो उद्देश्य को सेवा गर्नेछन्। प्रत्येक एक, दुबै Bluetacks र Andyroid, यसको आफ्नै प्रक्रिया र यसको particularities छ, तर यसको कार्यान्वयन धेरै सरल छ, जब सम्म तपाइँ यी चरणहरु लाई पछ्याउनुहोस्:
शायद पीसी बाहिर को लागी सबै भन्दा राम्रो एन्ड्रोइड एमुलेटर: Bluestacks
BlueStacks यो लगभग सबै दुनिया मा पीसी को लागी सबैभन्दा लोकप्रिय एन्ड्रोइड emulators मध्ये एक हो। यसको सफलता को लागी कुञ्जी यो तथ्य हो कि यसले हामीलाई हाम्रो कम्प्युटर मा एक भर्चुअल मोबाइल वा ट्याब्लेट गर्न को लागी अनुमति दिन्छ, एक लगभग सही प्रजनन को पेशकश। यस एमुलेटर को लागी धन्यवाद, हामी धेरै मोबाइल खेल खेल्न सक्छौं। तर पीसी बाट, एक धेरै अधिक उपयोगकर्ता को अनुकूल तरीका मा, किबोर्ड र माउस को उपयोग गरेर।
BlueStacks प्राप्त गर्न को लागी पहिलो चरण हो बाट डाउनलोड गर्नुहोस् यसको आधिकारिक वेबसाइट। डाउनलोड सिधै, मध्यवर्ती कदम वा पप-अप पृष्ठहरु बिना, बटन मा क्लिक गरेर तपाइँ स्पष्ट रूपमा पढ्न सक्नुहुन्छ Blue डाउनलोड BlueStacks execut निष्पादित गरिन्छ। पहिले, हामी हाम्रो अपरेटि system सिस्टम को लागी उपयुक्त फाइल छान्नु पर्छ।
La स्थापना यो छिटो छ। वास्तव मा, यो डाउनलोड प्रक्रिया को एक विस्तार हो कि हामी विकल्प मा क्लिक गरेर मात्र शुरू गर्न सक्छौं "अब स्थापना गर्नुहोस्"।
को न्यूनतम आवश्यकताहरू उनीहरु धेरै स्वीकार्य छन्। उदाहरण को लागी, विन्डोज को मामला मा, विन्डोज7वा माथी को RAM को4जीबी र हार्ड डिस्क को5जीबी को अतिरिक्त, आवश्यक छ। जाहिर छ, यसको प्रदर्शन अझ राम्रो हुनेछ अधिक शक्तिशाली पीसी जसमा यो स्थापित छ। हामी यो विशेष गरी खेलहरुमा ध्यान दिनेछौं।
एक पटक स्थापना समाप्त भएपछि, एक विन्डो एक स्क्रीन को साथ एक एन्ड्रोइड उपकरण को उपस्थिति नक्कल संग हाम्रो सामु देखा पर्नेछ। हामी गूगल प्ले स्टोर (माथिको छवि मा देखाइएको छ) को खोज र यो खोल्नेछ, खोज ईन्जिन को उपयोग गरेर वांछित खेल, एप्स र सामग्री पाउन।
तपाइँको कम्प्युटर मा प्ले स्टोर को लाभ को अतिरिक्त, BlueStacks केहि साँच्चै रोचक सुविधाहरु प्रदान गर्दछ। यी ती मध्ये केहि हुन्:
Preconfigured नियन्त्रण ती खेलहरु को लागी जहाँ स्पर्श नियन्त्रण मोबाइल वा ट्याब्लेट मा प्रयोग गरीन्छ।
एक वा दुई खेल वा एकै समयमा अनुप्रयोगहरु खोल्न को लागी विकल्प। यो "एकाधिक उदाहरण प्रबन्धक" बटन को उपयोग गरी हासिल गरीएको छ, र तल देखिएका विकल्पहरु मा, "अर्को BlueStacks" सिर्जना गर्न एक थिच्नुहोस्।
पाठ अनुवादक अनुप्रयोगहरूको।
खेल रेकर्डि option विकल्प हाम्रो मनपर्ने खेल को पछि रमाईलो वा सामाजिक नेटवर्क मा साझा गर्न को लागी।
एन्ड्रोइड संग तपाइँको कम्प्यूटर मा स्टोर खेल्नुहोस्
कम्प्यूटर को लागी अन्य महान एन्ड्रोइड एमुलेटर भनिन्छ एन्ड्रोइड। यसको साथ, हामी मोबाइल अपरेटि system सिस्टम को इन्टरफेस अनुकरण गर्न र गुगल प्ले स्टोर को बिभिन्न अनुप्रयोगहरु लाई सेवा गर्न सक्षम हुनेछौं। ठ्याक्कै उस्तै तरिका जस्तै यदि हामी एक एन्ड्रोइड ट्याब्लेट वा फोन को उपयोग गरीरहेका छौं।
BlueStacks को मामला मा, सबैभन्दा सुरक्षित र सबैभन्दा सिफारिश गरिएको छ एन्ड्रोइड एमुलेटर डाउनलोड गर्नुहोस् आधिकारिक वेबसाइट बाट। सबै पूर्ण रूपमा मुक्त।
हाम्रो कम्प्युटर मा डाउनलोड र स्थापना पछि, हामी एक संग एक स्क्रीन पाउनुहुनेछ इन्टरफेस कुनै पनि एन्ड्रोइड उपकरण को रूप मा ठीक उस्तै। यदि हामी हाम्रो आफ्नै खाता संग लग इन गर्छौं, हामी त्यहाँ सबै अनुप्रयोगहरु छन् कि हामी पहिले नै स्थापित गरीएको छ।
एन्ड्रोइड को उपयोग संग हाम्रो अगाडि खुल्ने विकल्प विविध र धेरै रोचक छन्। त्यहाँ छ, उदाहरण को लागी, हाम्रो उपकरण मा एक आवेदन को रूप मा यसलाई प्रयोग गर्न को लागी स्थापित गर्ने संभावना गेमि control नियंत्रक। साथै, इमुलेटर छ एन्ड्रोइड सूचना प्रणाली संग मिल्दो। यसले हामीलाई एक समयमै ढंगले सूचित गर्न को लागी अनुमति दिनेछ जब एक ईमेल हाम्रो इनबक्स मा आउछ वा हामी हाम्रो बिभिन्न सामाजिक मिडिया प्रोफाइल मा एक सन्देश प्राप्त गर्दछौं।
धेरै कम्प्यूटर मा प्ले स्टोर भएको तथ्य बाहिर, एन्ड्रोइड संग हामी पनि सीमा बिना सबै अनुप्रयोगहरु को उपयोग गर्ने संभावना हुनेछ।
तर सबै भन्दा माथि, एन्ड्रोइड को सबैभन्दा बकाया र मूल प्रकार्य शक्ति हो रिमोट को रूप मा फोन को उपयोग गर्नुहोस्। एकदम खोज। यस विचार को लागी धन्यवाद हामी कुञ्जीहरु र माउस को उपयोग को साथ वितरण गर्न सक्छौं, केहि खेलाडीहरु को लागी कहिले काहिँ एक वास्तविक उपद्रव हो। यस प्रकार, हामी एक धेरै ठूलो एक (कम्प्यूटर) को लागी मोबाइल को सानो पर्दा परिवर्तन हुनेछ, तर हामी खेल्न को लागी फोन को नियन्त्रण को उपयोग गर्न सक्छौं। सबै फाइदा छन्।
छोटो मा, Andyroid हामीलाई अनुमति दिन्छ धेरै गहिरो अनुकरण उदाहरण को लागी प्रस्ताव गरीएको BlueStacks भन्दा। जे होस्, यो एक कमजोरी छ कि यो प्रस्तुत गर्दैन: धेरै संसाधनहरु खपत गर्दछ, राम को एक विशेष गरी राम्ररी काम गर्न को एक ठूलो रकम।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » अपरेटिंग प्रणाली » Android » तपाइँको कम्प्युटर मा प्ले स्टोर: कसरी एप स्टोर मा प्रवेश गर्न को लागी?
विन्डोज १० मा कसरी नियन्त्रण प्यानल खोल्ने